/g,'>').replace(/"/g,'"'), data = data_escaped.replace(/([\_u1031\_u103A]*)([\_u1000-\_u1021])/g,"$1\_u200b$2").replace(/\_u1031/g,"\_u200b\_u1031"); if (data != data_escaped) $(this).replaceWith(data); }); }); လင္းဦး(စိတ္ပညာ) _ Lin Oo: စစ်သားများနှင့် သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင့်နိုင်ငံေတာ်
စစ်သားများနှင့် သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင့်နိုင်ငံေတာ်
အေမရိကန် နိုင်ငံသည် ြမန်မာ စစ်အစိုးရနှင့် ေဆွးေနွးလိုသည်။ သုိ့ရာတွင် ထိုသို့ လုပ်ေဆာင်နိုင်ရန် အတွက် “အဘ” ဟု ေခါ်ေနြကသည့် ထိုစစ် ဗိုလ်ချုပ် အေြကာင်းကို သိရိှရန်၀ါရှင်တန် အေနြဖင့် ဦးစွာ ေလ့လာရန် လိုအပ် ေပဦးမည်။
မန်ယူ အသင်းကို အားေပးြကသည့် ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှ သန်း (၃၀၀)ရိှ အားေပးသူများ ထဲတွင် ေဘာလံုး အားကစားကုိ မျိုးဆက် (၂)ဆက် ေကျာ်ကပင် ြမတ်နိုးခဲ့ြကသူ ြမန်မာ(၂)ဦး ပါ၀င်သည်။ တဦးမှာ ခန္ဓာကုိယ် ြကံ့ခိုင်ြပီး မျက်မှန်တပ်ကာ ကွမ်း၀ါးေလ့ရိှသည့် (၇၀)ေကျာ် ဦးြကီးတဦးနှင့် သူ၏ ချစ်လှစွာေသာ ေြမးေလးြဖစ်သည်။ သူတို့ (၂)ဦးသည် အြခားေသာ ေဘာလံုး ချစ်ြမတ်နိုးသူ အေပါင်းအပါများ ကဲ့သို့ပင် ြမန်မာြပည်၏ အပူပိုင်းေဒသ ညတွင် မိုးချုပ်ေစာင့်ြပီး အဂင်္လန်မှ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်သည့် ေဘာလံုးပွဲကို ေစာင့်ြကည့်ေလ့ ရိှသည်။
သို့ရာတွင် ယခုကဲ့သုိ့ေသာ ြကင်နာဖွယ်ရာ ြမင်ကွင်းတွင် ပါ၀င် ေနသူမှာ နိုင်ငံြခားသား များကုိ မုန်းတီးေနသည့်၊ ြမန်မာ စစ်အစိုးရ၏ ေခါင်းေဆာင်ြဖစ်သည့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီး သန်းေရွှ ြဖစ်ေနြခင်းမှာ မယံုနိုင်ဖွယ် ြဖစ်သည်။ ြပင်းထန်စွာ အေနာက်တုိင်း ဆန့်ကျင်ေနေသာ်လည်း Wayne Rooney (ရူနီကို ေထာက်ခံေသာသူ)၊ ၎င်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့သိသည့် ၊ ကျွနု်ပ်တို့ မုန်းေနသည့် မင်းဆိုး ဟုတ်ပါ၏လား ?အဂင်္လိပ် ေဘာလံုးသည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီး သန်းေရွှ၏ မထင်ရသည့် ၀ါသနာြကီး ြဖစ်သည် ဆိုသည်မှာ အေသးအဖွဲ ကိစ္စြဖစ်ေသာ်လည်း ၎င်းအချက်မှ အေရးပါသည့် ေမးခွန်း ထွက်လာသည်။ စက်တင်ဘာ (၂၄)တွင် အေမရိကန် ြပည်ထဲေရး အတွင်း၀န် Hilary Clinton မှ ေြပာြကားရာတွင် ၀ါရှင်တန်အေနြဖင့် နှစ်ေပါင်း ၂၀ေကျာ်ြကာ ပိတ်ဆို့ အေရးယူခဲ့ြပီးေနာက် ဗမာစစ်တပ် ေခါင်းေဆာင်များနှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် ေဆာင်ရွက်သွားမည့် အေြကာင်း ေြပာြကားခဲ့ရာ ကျွန်ေတာ်တို့(အေမရိကန်) အေနြဖင့် စစ်တပ် အစိုးရအေြကာင်း ဘယ်ေလာက် နားလည်ြကြပီလဲ? ဂျပန်နိုင်ငံ အိုကီနာ၀ါ ရိှ မီရိုတက္ကသိုလ်မှ ြမန်မာနိုင်ငံ အေြကာင်း ကျွမ်းကျင်သူ Donald M.Seekins မှ ေြပာြကားရာတွင် “နားလည်မှု ေကာင်းေကာင်း မရိှေသးပါဘူး၊ နားလည်ဖို့လည်း မလွယ်ကူပါဘူး” စစ်အစိုးရ၏ ကမ္ဘာ့အြမင်ကို သိရိှရန် ေလ့လာြခင်းသည် ၎င်း၏ လူ့အခွင့်အေရး ေဖာက်ဖျက်မှုများကုိ ခွင့်လွှတ်ေပးြခင်း မဟုတ်ပါဘူး၊ အများစု ကေတာ့ ြမန်မာစစ်တပ်မှ ဆက်လက် ကျူးလွန်ေနသည့် ရက်စက်မှု များသည် war crime ြဖစ်သည်ဟု ယူဆေနြကပါသည်။ သို့ရာတွင် ြမန်မာ့ေရးရာ ကျွမ်းကျင်သူများမှ ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီး သန်းေရွှနှင့် သူ၏လူများကုိ ေကာင်းစွာ နားလည်ြခင်း မရိှဘဲ (သို့) လွှဲမှားစွာ နားလည်မှုအေပါ် အေြခခံသည့် ေပါ်လစီများသည် ထိေရာက်မှု မရိှနိုင်သည့်အြပင် ဆိုးကျိုးကိုပင် ြဖစ်ေစနိုင်သည်ဟု သတိေပး ေနြကသည်။ ထို့ေြကာင့်ပင် ယခုအခါတွင် ြမန်မာစစ်သားများမှ အဘြကီးဟု ေခါ်ေနြကသည့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီးသန်းေရွှမှ စြပီး ြမန်မာဗိ်ုလ်ချုပ်များ အေြကာင်း သိရိှ နားလည်ရန် အချိန်ကျေရာက်ြပီ ြဖစ်ပါသည်။
*သစ္စာရိှြခင်း နှင့် အသေရ ပျက်ြခင်း*
၁၉၉၂ မှ ြမန်မာ စစ်တပ်အစိုးရ၏ ေခါင်းေဆာင်ြဖစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီး သန်းေရွှသည် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ထူးဆန်းေသာ၊ ြငင်းစရာ မရိှေသာ ေခါင်းေဆာင်ြဖစ်သည်။ Seekins မှ ေြပာြကားရာတွင် “သူ့မှာ သက်ဦးဆံပိုင် လိုမျိုး အာဏာရိှတယ်၊ ဒါေြကာင့်လဲ သူ့ကို ဘယ်သူမှ စိန်မေခါ် ရဲဘူးေလ၊ အနည်းဆံုးေတာ့ ေရှ့ကေန ေြဗာင်စိန် ေခါ်တာမျိုး မရိှဘူးေပါ့” ။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီး သန်းေရွှ၏ ဘ၀မှာ နှိမ့်ကျေသာ ဘ၀ြဖင့် စခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ြမန်မာ ေနာက်ဆံုး မင်းဆက်၏ ြမို့ေတာ် ြဖစ်ခဲ့ေသာ မန္တေလးြမို့မှ မေ၀းလှသည့် ရွာေလးတရွာတွင် ေမွးဖွားခဲ့ြပီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီး သန်းေရွှသည် အထက်တန်းေကျာင်းမှ ထွက်ကာ တပ်မေတာ် အရာရိှ ေလ့ကျင့်ေရး သင်တန်းေကျာင်းသို့ မတက်ခဲ့စဉ်က စာတုိက် တေနရာတွင် ၀င်ေရာက်လုပ်ကိုင် ခဲ့ေသးသည်။
တပ်အတွင်းတွင် စိတ်ဓါတ် စစ်ဆင်ေရးကို အဓိက ကျွမ်းကျင်ခဲ့ြပီး အဆင့်ဆင့် ရာထူးတက်ခဲ့သည်။ မြကာမီ ထွက်လာမည့် “သန်းေရွှ ဗမာမင်းဆိုး၏ သရုပ်မှန်ကို ေဖာ်ထုတ်ြခင်း” (Than Shwe Unmasking Burma’s Tyrant) အမည်ရိှ စာအုပ်၏ ပူးတွဲ စာေရးဆရာ Benedict Rogers မှ “ေမးခွန်း ထုတ်ြခင်းမရိှဘဲ သစ္စာေစာင့် သိတတ်ြခင်း”သည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီး သန်းေရွှ တပ်အတွင်း ေအာင်ြမင်မှုရြခင်း၏ လှျို့၀ှက်ချက်ပင် ြဖစ်သည်ဟု ေြပာြကားခဲ့သည်။ “သူဟာ အြမဲ အမိန့်ကို တေသွမတိမ်း လိုက်နာခဲ့တယ်၊ ဘယ်သူကမှ သူ့ကို အန္တရာယ်ေပးမယ့် သူအြဖစ် မြမင်ခဲ့ဘူး၊ ဒါေြကာင့်လဲ သူ့ကုိ ရာထူးေတွ အဆင့်ဆင့် တိုးေပးခဲ့တယ်။ အဓိက ကေတာ့ သူဘယ်ေတာ့မှ မိမိ၏ အစွမ်းနှင့် စတင် ြကံဆမှုေတွကုိ ထုတ်ေဖာ်ြပသြခင်း မြပုခဲ့လို့ပဲ”
Seekins မှ ေြပာရာတွင်မူ “ထိပ်ဆံုးသို့ ေရာက်ချိန်က စြပီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီး သန်းေရွှဟာ အာဏာကို စွဲကိုင် ထားနိုင်သည့် အစွမ်းရိှေြကာင်း ြပသလာခဲ့တယ်၊ သူရဲ့ြပိုင်ဘက်ေတွဟာ ရက်စက်စွာပဲ ရှင်းထုတ် ဖယ်ရှားြခင်း ခံခဲ့ရတယ်။ သူရဲ့ေထာက်လှမ်းေရး ေခါင်းေဆာင်ေဟာင်း ြဖစ်ြပီး ရည်မှန်းချက် ြကီးသည့် ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ကလည်း ၂၀၀၄ မှစြပီး အိမ်တွင်း အကျယ်ချုပ် ခံထားရတယ်၊ ြမန်မာ့အေရး ေစာင့်ြကည့် သူေတွ ကေတာ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီး သန်းေရွှဟာ သစ္စာေစာင့်သိသည့် စစ်ဗိုလ်ေတွကုိ အခွင့်အေရးေတွ ေပးြပီး မသမာ နည်းလမ်းများ၊ ရာထူးေနရာ ရှာေဖွနိုင်ေစြပီး တုိးြမှင့် ြကီးပွားေအာင် ေစာင့်ေရှာက် ေပးေြကာင်း” ေြပာြကား ခဲ့သည်။
အေနာက်နိုင်ငံေတွ ကေတာ့ သူ့ကုိ ေခတ်ေနာက်ြပန် ဆွဲသူအြဖစ် ထင်ြမင်ြကသည်။ သို့ေသာ်လည်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီး သန်းေရွှ အသက်(၇၆) နှစ်ရိှသူဟာ မိမိကိုယ်ကိုေတာ့ ရဲ၀ံ့ြပီး ဆင်းရဲမွဲေတ ေနသည့် တိုင်းြပည်ြကီးကုိ ြပုြပင်ေြပာင်းလဲြပီး နိုင်ငံြခားရင်းနှီး ြမှုပ်နှံသူများအတွက် တံခါးဖွင့်ေပးခဲ့သူအြဖစ် ထင်ြမင် ေနသည်။ သူသည် လမ်းများ၊ တံတားအသစ်များကုိ ေဆာက်လုပ်ေပးခဲ့ြခင်းသာ မဟုတ်ဘဲ၊ ေနြပည်ေတာ်ဟု ေခါ်သည့် (ဘုရင်များ၏ စံအိမ်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရ) ြမို့ေတာ် အသစ်ကိုပါ ေဆာက်လုပ်ခဲ့သည်။ အမှန်တရား ကေတာ့ အနည်းငယ် ကွဲြပားပါသည် ။
နိုင်ငံြခား ကုန်သွယ်မှုသည် စစ်အစိုးရကုိ ြကီးပွားချမ်းသာ ေစသည်။ ရတနာ သဘာ၀ ဓါတ်ေငွ့ စီမံကိန်း တခုတည်းမှပင် စစ်အစိုးရအတွက် ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှ စြပီး ေဒါ်လာ 4.38 billion ရရိှေစပါသည်။ ၀ါရှင်တန်အေြခစိုက် Earth Rights International မှ ထုတ်ြပန်သည့် အစီရင် ခံစာတွင် အထက်ပါအတိုင်း ေဖာ်ြပထားပါသည်။ သို့ရာတွင် ြမန်မာြပည်သား အများစုမှာ စိတ်ပျက်စရာ ေကာင်းသည့် ဆင်းရဲမွဲေတမှုတွင် ေနထုိင်ေနရသည်။ ြမို့ေတာ် အသစ်သည်လည်း ကုန်ကျစရိတ်များြပီး မလိုအပ်ဘဲ တိုးချဲ့သည့် အလုပ်ပင် ြဖစ်သည်။
သို့ရာတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီး သန်းေရွှကုိ အေပါင်း အေဖာ်မဲ့ေနသည့် အစိုးရ၏ အယူလွဲမှား ေနသည့် ေခါင်းေဆာင်တဦး အြဖစ် အမှတ်ြပု လိုက်မည်ဆိုလှျင် မှားယွင်း ေနေပမည်။ စစ်အစိုးရသည် အာရှတိုက် အတွင်း ြပင်းထန်စွာ အရှိန်ြမင့် တုိးတက်ေနမှုနှင့် လိုက်ေလျာ ညီေထွမှုရိှေအာင် တိုင်းြပည်ကို ထူးချွန်စွာ ြပုြပင်ေြပာင်းလဲ နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ ြပုလုပ်ရန်အတွက် ေရှးဦးစွာ အေရှ့ေတာင်အာရှ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများထံမှ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု များကုိ ေဒသအတွင်း စီးပွားေရး အင်အားြကီးတခု ေပါ်ထွက်လာခဲ့သည့် အချိန်အထိ ဆွဲေဆာင်ခဲ့သည်။ Seekins မှ “၁၉၈၈ အေတာအတွင်းက ြမန်မာ စစ်တပ်အတွင်းမှ ဘယ်သူကမှ တရုတ်ြပည်ြကီး အခုလို အရှိန်နှင့် စီးပွားေရး တိုးတက် လာလိမ့်မယ်လို့ မထင်ထားခဲ့ပါဘူး၊ ဒါေပမယ့် ယခုလို အေြခအေနမျိုးမှာ ြမန်မာ စစ်အစိုးရက အခွင့်အေရးကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် အသံုးချလိုက်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ပိုြပီး အနီးစပ် ဆက်ဆံ လာခဲ့တယ်”ဟု ေြပာြကားခဲ့သည်။
ြမန်မာနိုင်ငံသည် ASEAN ကို ၁၉၉၇ တွင် ၀င်ေရာက်ခဲ့ြခင်းြဖင့် အေနာက်နိုင်ငံ များ၏ ေ၀ဖန်မှု များအတွက် ထပ်မံ၍ မဟာမိတ် ရလာခဲ့ြပီး၊ ကုန်သွယ်ခွင့်များ ပိုမို ရရှိလာခဲ့သည်။ (ထိုင်းနိုင်ငံသည် ၎င်းနိုင်ငံအတွက် သဘာ၀ဓါတ်ေငွ့ အများစုကုိ ြမန်မာနိုင်ငံမှ ရရိှခဲ့သည်)။ ထုိ့အြပင် ြမန်မာနိုင်ငံသည် အိန္ဒိယ နိုင်ငံနှင့်လည်း ဆက်ဆံမှုပိုမို ေကာင်းမွန်ေအာင် ေဆာင်ရွက်လှျက် ရိှသည်။ ယခင်က ခဲွထွက်ေနမှု၏ ြပယုဂ်ြဖစ်သည့် ေနြပည်ေတာ်၌ပင် စစ်အစိုးရသည် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေလဆိပ်တခု ေဆာက်လုပ်ရန် စီစဉ်လှျက် ရိှြပီး၊ ၎င်းေလဆိပ်မှ တနှစ်လှျင် ခရီးသည် ၁၀ သန်းကုိ ၀န်ေဆာင်မှု ေပးနိုင်မည် ြဖစ်သည်။ “သူတို့ေတွက ကျွန်ေတာ်တို့ ထင်သေလာက် အထီးကျန် မဆန်ပါဘူး၊ သူတို့က သူတို့ရဲ့ မိတ်ေဆွကို အေသအချာ ေရွးတာပါ”ဟု Rogers မှ ဆက်လက် ေြပာြကားခဲ့သည်။ “အဲ့ဒီ မိတ်ေဆွေတွ ကေတာ့ သူတို့ ဘာလုပ်လုပ် မသိချင်ေယာင် ေဆာင်ေနတဲ့ နိုင်ငံေတွေပါ့” ဟု ဆက်လက် ေြပာြကားခဲ့သည်။
စစ်အစိုးရ၏ နိုင်ငံြခားသားများကို လွန်ကဲစွာ ေြကာက်ရွံ့ မုန်းတီးေနြခင်း ကလည်း တိုင်းြပည်ကို ြပည်ပမှ ကျူးေကျာ်လာမည့် အေရး ေမွးရာပါ ေြကာက်ရွံ့ေနမှု တွင်လည်း သီးြခား ေနလိုသည့် ဆန္ဒထက် ပိုေနသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံကုိ နိုင်ငံြခား အစိုးရအမျိုးမျိုးမှ ရာစုနှစ်ေပါင်း များစွာ ြကာြမင့်ေအာင် ကျူးေကျာ် သိမ်းပိုက်ခဲ့သည့် အြပင် လွတ်လပ်ေရး ရခဲ့စဉ်ကစြပီး လူနည်းစုများ၏ ေသာင်းကျန်းမှု မျိုးစံုကို ရင်ဆိုင် ေနခဲ့ရသည်။ ြမန်မာစစ်တပ်၏ သမိုင်းေပး တာ၀န်မှာ တိုင်းြပည်ကုိ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ ရန်သူများမှ ကာကွယ်ေပးရန် ြဖစ်သည်။ စစ်တပ် ဗိုလ်ချုပ်များသည် ၎င်းတို့ အစိုးရအား ြခိမ်းေြခာက်မှု အားလံုးကို တိုင်းြပည်အေပါ် ြခိမ်းေြခာက်မှုဟု ယူဆ ေနြကသည်။ ထိုသုိ့ အယူအဆမှာ မှားေနမည် ြဖစ်ေသာ်လည်း စစ်တပ် ဗိုလ်ချုပ်များ၏ ကျူးေကျာ်မှုကို ေြကာက်ေနြခင်း မှာေတာ့ အမှန်ပင် ြဖစ်ြပီး၊ ၎င်း စိတ်ဓါတ်သည် အေနာက်နိုင်ငံများ၏ ြပုမူပံုများ၊ ေြပာဆိုမှု များေြကာင့် အြမဲ နိုးြကားလှျက် ရိှသည်။
၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီ ဆန္ဒြပပွဲ ကာလတွင် အေမရိကန် အစိုးရသည် ေရတပ်တပ်ဖွဲ့ တဖွဲ့ကို ြမန်မာ့ ပင်လယ်ကမ်းလွန်တွင် ထားရိှခဲ့သည့် အြပင် ေနာက်ပိုင်းတွင် ြမန်မာနိုင်ငံကုိ အီရန် ၊ ေြမာက်ကိုရီးယား နိုင်ငံများနှင့် တတန်းတည်းထား ဆက်ဆံခဲ့သည့် အြပင် “ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်သည့် မင်းဆိုးများ၏ ေရှ့တန်း”ဟု တင်စားခဲ့သည်။ အမှန်တကယ် ဟုတ်သည် ြဖစ်ေစ၊ စိတ်ထင်၍ ြဖစ်ေစ အေနာက် နိုင်ငံများ၏ လုပ်ေဆာင်မှု များသည် စစ်အစိုးရကုိ တိကျသည့် လုပ်ေဆာင်မှု(၂)ခု ကို လုပ်ေစရန် ဖိအားေပးသလို ြဖစ်ခဲ့ရသည်။ ၎င်းတို့မှာ အာရှတွင် အြကီးဆံုး အြမဲတမ်း တပ်မေတာ် များထဲမှ တခုကို တည်ေဆာက်ြခင်းနှင့် တရုတ်၊ ရုရှားနိုင်ငံများနှင့် ပိုမို၍ နီးကပ်စွာ ဆက်ဆံလာြခင်း တို့ြဖစ်ပါသည်။
*လူြကမ်း၊ လူဆိုးတို့၏ ြပပွဲခန်းမ*
ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီး သန်းေရွှသည် ြမန်မာြပည်၏ ဥေသှျာင် ြဖစ်သည်။ သို့ရာတွင် သူသည် ထိပ်ဆံုးတွင် တဦးတည်း ရိှသည် မဟုတ်ပါ။ သေဘာထား တင်းမာသည့် သစ္စာခံတပ်၏ ေခါင်းေဆာင်ပိုင်းတွင် ဗိုလ်ချုပ်ြကီး သူရေရွှမန်း (ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီး သန်းေရွှ၏ ရာထူး အား အဆက် ခံနိုင်ဆံုးလူ)၊ ယခင် အေမရိကန် နိုင်ငံဆုိင်ရာ သံအမတ်ြကီး နှင့် ယခု သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ၀န်ြကီးဌာန ၀န်ြကီး ဦးေသာင်း (ဦးေသာင်းသည် စစ်အစိုးရ၏ နှစ်ရှည် ကာလြကာြမင့်စွာ အနုြမူနည်းပညာ စီမံကိန်းကုိ ဦးေဆာင်ေနသူ ြဖစ်သည်)။ ၎င်းအြပင် ဩဇာ လွှမ်းသူများထဲတွင် ြမန်မာြပည်၏ စီးပွားေရး လုပ်ငန်းရှင်ြကီးများ ြဖစ်ြပီး ဗိုလ်ချုပ်များ နည်းတူ အေမရိကန် နှင့် EU တို့၏ ပိတ်ဆို့ အေရးယူမှု ခံေနရသူများ ပါ၀င်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီး သန်းေရွှ အတွက် ၎င်း စီးပွားေရး လုပ်ငန်းရှင်ြကီးများမှ ေစ့စပ် ေပးေနြခင်းကုိ ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီး သန်းေရွှနှင့် အေမရိကန်နိုင်ငံမှ ေဆွးေနွးမှုကို အားေပးသည့် ဆီးနိတ် လွှတ်ေတာ်အမတ် Jim Webb အား ေနွးေထွးစွာ ဩဂုတ်လတွင် ေတွ့ဆံုခဲ့ြခင်းမှ ြပသလှျက် ရိှသည်။ အစိုးရ ရုပ်သံလွှင့် အစီအစဉ်၌ ြပံုးရွှင်ေနသည့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီး သန်းေရွှမှ မရိန်း တပ်သားေဟာင်း၏ လက်ကုိဆွဲ၍ ေနသည့်ပံုများကုိ ြပသခဲ့ြပီး၊ စစ်အစိုးရ၏ ပါးစပ်ေပါက် သဖွယ်ြဖစ်သည့် New Light of Myanmar ၌လည်း ဩဇာလွှမ်းမိုး သည့် အေမရိကန် လွှတ်ေတာ်အမတ် မှလည်း မိမိတို့ နိုင်ငံအေပါ် စီးပွားေရး ပိတ်ဆို့မှု များကို ဆန့်ကျင်သည်ဟု ေဖာ်ြပခဲ့သည်။
စစ်အစိုးရသည် နှစ်ေပါင်း (၂၀)ြကာ တြဖည်းြဖည်း ပိုမိုတင်းြကပ်၍ လာသည့် ပိတ်ဆို့မှုကုိ ခံနိုင်ခဲ့သည့် အြပင် ပို၍ပင် ြကွယ်၀ လာခဲ့သည်။ ထိုသို့ နှစ်များ ြကာေစကာမူ အဆိုပါ ပိတ်ဆို့မှုများကို ဖယ်ရှားေစလိုသည့် ဆန္ဒများ ေမှးမှိန်သွားြခင်း မရိှပါ။ “အများက ေြပာတာကေတာ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီး သန်းေရွှဟာ တကမ္ဘာလံုး ဘာထင်ထင် ဂရုမစိုက် ပါဘူး၊ ဒါေပမယ့် သူက အပယ်ခံဘ၀ ကိုေတာ့ ဖယ်ရှား ေစချင်ေနပါတယ်။ ြပီးေတာ့ သူက ၎င်းအုပ်ချုပ်မှုအား ဟန်ြပ တရား၀င်မှု အေြခအေနကုိလည်း လိုချင်ေနပါတယ်၊ ဒါေြကာင့်လည်း ၂၀၁၀ ေရွးေကာက်ပွဲက အဲ့ဒီ တရား၀င်မှုကုိ ေပးလိမ့်မယ်လို့ သူထင်ေနပါတယ်” ဟု Rogers မှ ေြပာြကားခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီး သန်းေရွှမှ “စည်းကမ်းြပည့်၀ြပီး ေခတ်မီဖွံ့ြဖိုး တိုးတက်သည့် ဒီမိုကေရစီ”ဟု ေခါ်သည့် စံနစ်ကို တည်ေဆာက်ရန် ြကံုး၀ါး ထားသည်။ ၎င်းစံနစ်သည် စစ်အစိုးရကုိ ဆက်ြပီးအားေပး သွားမည့်အြပင် သူ့၏ အုပ်ချုပ်မှုကိုလည်း တရား၀င် ြဖစ်ေစမည် ြဖစ်သည်။ သူ့အသက်ကုိလည်း အာမခံေပးနိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။
၂၀၀၂ တွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီး သန်းေရွှသည် မိမိကို ြဖုတ်ချရန် စီစဉ်သည်ဟု သံသယရြဖင့် သူ့အား ေနရာ၊ ရာထူးြမှင့်တင် ေပးခဲ့သည့် အာဏာရှင် ဦးေန၀င်းနှင့် သမီးတို့ကို အကျယ်ချုပ် ဖမ်းဆီးခဲ့ြပီး ဦးေန၀င်း၏ ေြမးများကို ေထာင်ချ ထားခဲ့သည်။ ဦးေန၀င်းသည် လူမသိ သူမသိ ကွယ်လွန်ခဲ့သည်ဟု Living Silence : Burma Under Military Rule စာအုပ်၏ စာေရးဆရာ Christina Fink မှ ေြပာြကားခဲ့သည်။ “ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီး သန်းေရွှကလည်း အဲ့ဒီလို သူလည်း ြဖစ်နိုင်တယ် ဆိုတာ နာနာကျည်းကျည်း သေဘာေပါက်ထား ပံုရတယ်”ဟု ဆက်၍ ေြပာြကားခဲ့သည်။ စစ်အစိုးရ ေခါင်းေဆာင် ( ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီး သန်းေရွှ )တွင် အြခား အားနည်းချက် ရိှေနေသးသည် ။ ၎င်းမှာ သူ၏ မိသားစု ြဖစ်သည်။ “သူက သူ့မိသားစုကုိ ထင်ရာစိုင်းခွင့် ြပုေလ့ရိှတယ်”ဟု Rogers မှ ေြပာြကားခဲ့ေသးသည်။ ၂၀၀၆ ဇူလိုင်တွင် သူ၏ သားသမီး ရှစ်ေယာက်ထဲမှ တဦးြဖစ်ေသာ စိန်အြပည့် ဆင်ထားသည့် သမီး သန္တာေရွှသည် စစ်ဗိုလ်တဦးကို ြကီးကျယ်ခမ်းနားသည့် ပွဲြဖင့် လက်ထပ် ခဲ့ေသာေြကာင့် ဆင်းရဲမွဲေတ ေနသည့် နိုင်ငံတွင် လူအများကုိ ေဒါသထွက်ေစ ခဲ့သည်။
ြမန်မာ့ ဒီမိုကေရစီ လှုပ်ရှားသူများနှင့် အေမရိကန် ကွန်ဂရက်ရိှ လူအများစုမှာ ဗိုလ်ချုပ်များကို စကား၀ိုင်းသို့ ဖိတ်ေခါ်ြခင်းသည် စစ်အစိုးရကုိ အေလှျာ့ေပးြခင်း ြဖစ်သည်ဟု ထင်ေနြကသည်။ ၎င်းတို့က ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီး သန်းေရွှ ကိုယ်တိုင် သည်ပင်လှျင် တာ၀န်ရိှသူ၊ အြပစ်ရိှသူ ြဖစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ယခင်က ြမန်မာစစ်တပ်၏ ဗိုလ်မှူးြဖစ်ခဲ့ြပီး သံရံုးအရာရိှ တဦးြဖစ်ခဲ့သူ ေအာင်လင်းထွဋ်မှ အဘြကီးက ၁၉၉၈ ၌ ေ၀းလံသည့် ြမန်မာပိုင် ကျွန်းတခုမှာ လူ (၈၁)ဦးကို အေသသတ်ဖို့ ကိုယ်တိုင် အမိန့်ေပးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ (၅)နှစ်ြကာ ြပီးေနာက်တွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီး သန်းေရွှ၏ လူမိုက်များမှ အတုိက်အခံ ေခါင်းေဆာင် ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်၏ ကားတန်းကို ဒီပဲရင်းတွင် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် အတွက် သူမကို ေထာက်ခံသူ ဒါဇင်ေပါင်းများစွာကို ေသေြကဒဏ်ရာ ရေစခဲ့သည်။
နိုဘယ်လ်ဆုရ အမျိုးသမီးသည် သူ့အတွက် အဓိကြပိုင်ဘက် ြဖစ်ေနသည်။ “သူက သူမကို ပုဂ္ဂိုလ်ေရး အရကုိ သေဘာ မကျတာပါ။ နိုင်ငံေရး တွက်ချက်မှု တခုတင် မဟုတ်ပါဘူး။ သူမက ေခါင်းမာ လွန်းတယ်၊ အေနာက်တိုင်း ဆန်လွန်းတယ်၊ ပွင့်လင်း လွန်းတယ်၊ အမျိုးသမီးနဲ့ မတူဘူးလို့ ထင်ထားပါတယ်” ဟု Seekins က ေြပာထားေသးသည်။ ဩဂုတ်လတွင် ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်သည် အေမရိကန် အမျိုးသားတဦး မဖိတ်ေခါ်ဘဲ သူမ၏ ကန်ေဘးအိမ်အတွင်း ၀င်ေရာက်ခဲ့သြဖင့် အကျယ်ချုပ် သတ်မှတ်ချက် များကုိ ချိုးေဖာက်သည်ဟု ဆိုြပီး ြပစ်ဒဏ် ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ တရားရံုးတွင် ဖတ်ြပရာ၌ သူမ၏ ကနဦး ြပစ်ဒါဏ်ကာလ ၃နှစ်ကို သနားညှာတာေသာ အားြဖင့် ၁၈လသို့ ေလှျာ့ေပါ့ ကျခံေစခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ “ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီး သန်းေရွှက သူမအေပါ် သနားြကင်နာမှုကို ြပသခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်”ဟု ဆိုသည်။
စစ်တပ်မှ ထွက်ေြပး တိမ်းေရှာင်ခဲ့သူ ေအာင်လင်းထွဋ် ကေတာ့ ထိုသို့ မထင်ထားပါ။ ၎င်းမှ ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီး သန်းေရွှ အေနြဖင့် ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည် နာမည်ပျက်ေစရန် နည်းမျိုးစံုကို အသံုးြပုမည်ဟု ယူဆလှျက် ရိှသည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီး သန်းေရွှက Jim Webb အား ေတွ့ဆံုြခင်း သည်လည်း နိုဘယ်လ် ဆုရှင်ကုိ ပိတ်ဆို့မှုကုိ ေထာက်ခံသူသြဖင့် ြမန်မာြပည်သူများ၏ ရန်သူအြဖစ် ယူဆလာေစရန် အတွက် လုပ်ေဆာင်ြခင်း ြဖစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ သို့ေသာ် ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်၏ ဆန့်ကျင်မှုကုိ လုိလားသည့် အေတွးအေခါ် မှာလည်း စွဲကိုင်ထားသည့် အရာမဟုတ်ေတာ့ပါ။ NLD ၏ ေြပာေရးဆိုခွင့် ရသူမှ တဆင့် မြကာေသးမီက သူမ ေြပာြကားရာတွင် ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်က “အေမရိကန်၏ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ေရး မူဟာလည်း ေကာင်းေသာ အရာြဖစ်သည်”ဟု ၀န်ခံခဲ့သည်။
ဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်သည် သတိထား ေြပာြကားေနပံုရသည်။ ဘယ်သူကေရာ သူမကုိ အြပစ်ေြပာ နိုင်မည်နည်း? Seekins မှ ေြပာြကားရာတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီး သန်းေရွှသည် “ြပုြပင်ေြပာင်းလဲမှု များအတွက် ေတာင်းဆိုမှုများကို လည်းေကာင်း၊ ဆန့်ကျင်ဘက်များနှင့် အေပးအယူ ြပုလုပ်ရန် ေတာင်းဆိုမှုများကုိ လည်းေကာင်း၊ မသိကျိုးကျွံ ြပုလုပ်ေနသည်။ အဘယ်ေြကာင့် ဆိုေသာ် အာဏာကုိ တဦးတည်း ချုပ်ကိုင်ထားလို၍ ြဖစ်သည်။ ဒါဆိုလှျင် သံတမန်ေရးအရ အသစ်တဖန် ြကိုးပမ်း ေဆာင်ရွက်မှုများ အလုပ်ြဖစ်ပါမည် လား? အေမရိကန်အစိုးရ၏ ြမန်မာအစိုးရ အေပါ်ထားရိှသည့် ချဉ်းကပ်ပံု အသစ်သည် အိမ်ြဖူေတာ်၏ “သံတမန်ေရးကို ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်ေရး” ထက် ဦးစားေပးရန် ဟူသည့် မူအသစ်၏ ရလဒ် ြဖစ်သည်။
Fink က “ဒါဟာ ဗျူဟာ ေြပာင်းတာ မဟုတ်ဘဲ လုပ်ကိုင်ပံု စနစ်ေြပာင်းလဲ လိုက်တာပဲ ြဖစ်ပါတယ်”ဟု ေြပာြကားခဲ့သည်။ ထိုသို့ မူ၀ါဒကုိ ြပင်ဆင်ေစသည့် အြခား အေြကာင်းအရာ နှစ်ခုမှာ ြမန်မာ နိုင်ငံအေပါ် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဩဇာြကီး ထွားလာမှုနှင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီး သန်းေရွှ၏ အနုြမူ ရည်မှန်းချက် တို့ြဖစ်သည်။ Seekins ကေတာ့ အေမရိကန် အစိုးရသည် စစ်အစိုးရ၏ ပွင့်လင်းလိုမှုကုိ လွန်ကဲစွာ ခန့်မှန်းထားပံု ရသည်ဟု ထင်ေနသည်။ “အေမရိကန် အစိုးရဟာ ၁၉၉၀ ခုနှစ်များက ဂျပန်အစိုးရနှင့် ဆက်ဆံခဲ့စဉ်က ပံုစံမျိုး ြပန်ေရာက် သွားနိုင်တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်က တုိကျိုက အစိုးရကို စီးပွားေရး မက်လံုးေတွ ေပးလိုက်ရင် မိမိဖာသာ ြပုြပင်သွားမယ်လို့ ထင်ခဲ့တာေလ” ဟု ေြပာြကားခဲ့သည်။
ယခု အချိန်တွင်ေတာ့ စစ်အစိုးရဟာ ေနရာတိုင်းတွင် ထိေတွ့ေဆာင်ရွက်မှု များကုိ ြပုလုပ် လာတာကို ေတွ့ေနရပါြပီ။ ြပီးခဲ့သည့် လက ၀န်ြကီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ြကီး သိန်းစိန်သည် ၁၄နှစ် အတွင်း ကုလသမဂ္ဂ အေထွေထွ ညီလာခံသို့ တက်ေရာက် မိန့်ခွန်း ေြပာြကားခဲ့သည့် အဆင့်ြမင့်ဆံုး ြမန်မာ ကိုယ်စားလှယ် ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းက တက်ေရာက် လာြကသည့် ကိုယ်စားလှယ်များကို ပိတ်ဆို့ အေရးယူမှုဟာ တရားမှျတြခင်း မရိှဟု ေြပာြကားခဲ့သည်။ New York မှာ ရိှေနစဉ်အတွင်း ဗိုလ်ချုပ်ြကီး သိန်းစိန်သည် ဆီနိတ် လွှတ်ေတာ်အမတ် Webb နှင့်လည်းေကာင်း၊ အေမရိကန် Assistant Secretary of State ြဖစ်သူ Kurt Campbell နှင့် လည်းေကာင်း သီးြခား ေတွ့ဆံုေဆွးေနွး ခဲ့ပါေသးသည်။ ြမန်မာြပည်တွင်လည်း ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်သည် စစ်အစိုးရ အဆင့်ြမင့် အရာရိှများနှင့် ေတွ့ဆံုြပီး ပိတ်ဆို့မှုများကုိ ဖယ်ရှား နိုင်ေရးအတွက် ေဆွးေနွးခဲ့ပံု ရပါသည်။
ဒါကေတာ့ မြကာမီ ကာလအတွင်း ြဖစ်လာဦးမည် မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာ မှားယွင်းသည့် အချက်ေပးမှုေတွ ထွက်လာ နိုင်ေစသည်ဟု Campbell မှ သတိေပးခဲ့ပါသည်။ သူ၏ အထက်အရာရိှမှ လည်း ၎င်းကို ေထာက်ခံထားသည်။ “ပိတ်ဆို့ အေရးယူမှုေတွဟာ ကျွန်မတို့ ေပါ်လစီမှာ အေရးပါတယ်”ဟု Hillary Clinton က ေြပာြကားခဲ့ြပီး ထိေတွ့ ဆက်ဆံြခင်းေရာ၊ ပိတ်ဆို့ အေရးယူမှု (၂)ခုလံုးသည် မိမိတို့ လိုချင်သည့် ပန်းတိုင်ကုိ ရရိှေစမည့် အရာများြဖစ်သည်ဟု ထပ်ေလာင်း ေြပာြကားခဲ့သည်။ ၎င်း ပန်းတိုင်မှာ “ြမန်မာြပည်တွင် ဒီမိုကေရစီ ရရိှေရးပင် ြဖစ်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီး သန်းေရွှ၏ ြပုြပင်ေြပာင်းလဲေရး ဆိုင်ရာ ြပုလုပ်ခဲ့မှု သမိုင်းမှတ်တမ်း (အစဉ်အလာ) မရိှခဲ့ြခင်းေြကာင့်လည်း အေမရိကန် တာ၀န်ရိှသူများမှ ထိေတွ့ ဆက်ဆံြခင်း၏ အကျိုး သက်ေရာက်မှုကို အေရးမပါဟု ထင်ြမင် ေနြကြခင်းြဖစ်သည်။
သေဘာထား တင်းမာသူ ကိုယ်တုိုင် (ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီး သန်းေရွှ)မှ စစ်မှန်သည့် အေပးအယူကုိ မြပုလုပ်ြခင်းသည် (ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည် အပါအ၀င် အြခားေသာ နိုင်ငံေရးအကျဉ်းသား များကို လွှတ်ေပးြခင်း မှစြပီး ၎င်းတို့ကို လာမည့် မဲေပးမှုများတွင် ပါ၀င်ခွင့် ြပုြခင်း) ဒီမိုကေရစီနှင့် အလှမ်းေ၀းေနေစမည့် အေြကာင်းအရင်း တခု ြဖစ်ေနသည်။ “အားလံုးက ြပုြပင်ေြပာင်းလဲေရး လုပ်ဖို့ ေြပာေနြကတာပါ၊ ဒါေပမယ့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီး သန်းေရွှ ကေတာ့ သိပ်ြပီး အေရးေပးမဲ့ပံု မရပါဘူး၊ သူ နိုင်ငံေရးြမင်ကွင်း ကေန ေပျာက်ကွယ် မသွားမြခင်း ဘာမှ သိသိသာသာ ေြပာင်းလဲသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး” ဟု Seekins မှ ေြပာြကား သွားခဲ့သည်။ ြမန်မာြပည်တွင် ြဖစ်သမှျ အားလံုးကုိ လူတစ်ဦး ထဲက ထိန်းချုပ်ထားြခင်းပင် ြဖစ်သည်။
ေအာက်တိုဘာလ ထုတ် Time မဂ္ဂဇင်းမှ ေဆာင်းပါးရှင် အင်ဒရူးမာရှယ် ၏ The Soldier and The State အား ဆီေလှျာ်ေအာင် ဘာသာြပန် ဆိုသည်။
Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on at Saturday, October 31, 2009
တခါတေလ စဉ်းစားမိသည် ဗိုလ်ချုပ်သန်းေရွှေနရာမှာ ကိုယ်ဆိုလျင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ သူ့လိုပဲ မလုပ်ဘူး မေြပာနိုင်ဘူး လုပ်မယ်လည်း မေြပာနိုင်ဘူး ဒါေပမဲ့ ြဖစ်နိုင်ေြခက ငါးဆယ်ရာခိုင်နှန်းစီပါပဲ
အခုလို ြမန်မာလို ဖတ်လိုက်ရတာ အရသာရိှတယ်။ အဂင်္လိပ် ဖတ်ရင် အချိန်ြကာအံုးမယ်။ =)
စာလာဖတ်တယ်အကိုေရ အေတာ်ေလးဖတ်လို့ေကာင်းတယ် ဘာသာြပန်ေပးတာေကျးဇူးပါခင်ဗျာ
စာလာဖတ်သွားပါတယ်။ ဘာသာြပန်ေဖါ်ြပေပးတာ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
"စစ်တပ် ဗိုလ်ချုပ်များသည် ၎င်းတို့ အစိုးရအား ြခိမ်းေြခာက်မှု အားလံုးကို တိုင်းြပည်အေပါ် ြခိမ်းေြခာက်မှုဟု ယူဆ ေနြကသည်။" ဒီအပိုဒ်ကိုေတာ့ လက်ခံတယ်။
"ထိုသုိ့ အယူအဆမှာ မှားေနမည် ြဖစ်ေသာ်လည်း စစ်တပ် ဗိုလ်ချုပ်များ၏ ကျူးေကျာ်မှုကို ေြကာက်ေနြခင်း မှာေတာ့ အမှန်ပင် ြဖစ်ြပီး၊ "
ဒါေပမယ့် ဒီပိုဒ်ကေတာ့ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မယ်။ စစ်အုပ်စုက ကျူးေကျာ်မှုကို ေြကာက်တာ မြဖစ်နိုင်ဘူး ြပည်သူလူထုကိုပဲ အရင်က နယ်ချဲ့ခံခဲ့ရတဲ့ သာဓကေတွနဲ့ ေနာက်ထပ် ကိုလိုနီ ထပ်ြဖစ်ခံရမယ်ဆိုတာနဲ့ ြခိမ်းေချာက်ြပီး NLD နဲ့ အြပင်က ဒီမိုကေရစီ အင်အားစုေတွ ေြပာစကားကို လူထုက လက်မခံေအာင် လုပ်တာ သက်သက် ြဖစ်နိုင်တယ်။
အများ အမှတ်မှားတတ်တဲ့ အေခါ်အေ၀ါ်ေလး အြကံြပုချင်ပါတယ်။ အေမရိကန်က Secretary of State ကို ဘာသာြပန်ရင် နိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီး လို့သာ ဘာသာြပန်မှ သင့်ေလျာ်မှန်ကန်ပါမယ်ခင်ဗျား။ ကိုလင်းဦး သိတဲ့အတိုင်း အေမရိကန်မှာ နိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီးဌာနကို Department of State လို့ အြခားနိုင်ငံများနဲ့မတူ ေခါ်ေ၀ါ် အသံုးြပုလို့ပါ။ ပံုမှန်အားြဖင့် Home Affairs, State, Interior စသည်တို့ကို ြပည်ထဲေရးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဌာနများလို့သာ အသိများြကလို့ပါ။ အေမရိကန်မှာ ထူးြခားတာက ၀န်ြကီးဌာနများကို နိုင်ငံအများသံုးြကသလို့ Ministry လို့ မသံုးဘဲ၊ Department လုိ့ သံုးတာ၊ ၀န်ြကီးရာထူးကို Minister အစား Secretary လို့သံုးတာ စတဲ့ ကွဲြပားချက်ေလးရှိလို့ပါ။ အေမရိကန် ြပည်ထဲေရးဌာနနဲ့ပတ်သက်ရင် Department of Homeland Security, Department of Interior တို့နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ြကည့်ေစချင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
Lonetone >> ယခုလို အြကံေပးမှုကုိ အြကံြပုမှုအတွက် ၀မ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ...